नुभिव उप्रेतीको आत्महत्या नभई हत्याः प्रहरी – Palika Times
नुभिव उप्रेतीको आत्महत्या नभई हत्याः प्रहरी
७ जेठ, काठमाडौं । गत वैशाख ४ गते विहान एक किशोरको शव फेवातालमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला प¥यो । नेपाली सेनाको टोलीले भेट्टाएको सो शव बारा निजगढ स्थायी घर भई ललितपुर खुमलटार बस्ने १८ वर्षीय नुभिव उप्रेतीको थियो ।
तालमा तैरिएको अवस्थामा फेला शव परेकाले प्रहरीले त्यसलाई मसिनो गरी अनुसन्धान गरेन । परिवारसँग सम्पर्क गरेपछि किशोरले आत्महत्या गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो । सोहि निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले पत्रकारलाई ती युवाको आत्महत्याको सुचना सम्प्रेषण ग¥यो ।
तर प्रहरीले अहिले भने त्यो घटनाको फरक निष्कर्ष निकालेको छ । एकमहिना अघि युवाले आत्महत्या गरेको भनेको प्रहरी अहिले आएर त्यो आत्महत्या नभई हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेको हो । सुरुमा आत्महत्या भनेको प्रहरी अहिले आएर कसरी हत्या भएको निष्कर्षमा पुग्यो ? त्यो थाहा पाउन एकमहिना अघिको घटनातर्फ फर्कनुपर्छ ।
सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट प्लस टु गरेका नुभिव सिटिजन कलेज कुमारीपाटीमा आईटीको बिसिए कोर्ष गरिरहेका थिए । बैशाख ३ गते विहान उनलाई बुबाले कलेज छाडेका थिए । कलेज गएका नुभिव बेलुका घरमा फर्केनन् । उनको खोजीका लागि परिवार भौतारियो । मोवाइल स्वीचअफ थियो । उनकी आमा भीमा मैनालीले छोरालाई कहाँ छौ तिमी ? हामी तिमीलाई खोजी गरिरहेका छौं भनेर म्यासेज गरिन् । त्यसको दुईघण्टापछि छोराले भीमालाई म्यासेज गरे, ‘म अहिले बोल्न नमिल्ने ठाउँमा छु, मेरो मोवाइलको पासवर्ड….. हो भनेर’ पठाए । त्यसको भोलिपल्ट नुभिवको शव फेवातालमा भेटियो ।
छोराको शव भेटिएको भनेर प्रहरीले खबर गरेपछि भीमा र उनको परिवार पोखरा आयो । पोखरामा आएर छोराको अनुहार हेरेर मात्र शव बुझ्न खोज्दा प्रहरीले पहिले शव बुझ्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न भन्यो । परिवारले पनि कुनै अब्जेक्सन नगरी हस्ताक्षर ग¥यो । तर जब शव बुझे उनीहरु झसंग भए । किनकी छोराको अनुहारदेखि शरिरका विभिन्न भाग र गुप्ताङ्गमासमेत चोटैचोट थियो । भीमाले त्यतिबेलै जाहेरी दिन खोजिन् तर आफन्तले शव व्यवस्थापन गर्न अत्याउँदा त्यसै काठमाडौं फर्किइन । यो बीचमा प्रहरीले खासै अनुसन्धान अगाडि बढाएन ।
तर छोराको मृत्युको पीडामा रहेकी भीमाको मन कहाँ मान्थ्यो र ? उनले घटनाको सोधखोज गरिरहेकी थिईन् । यहि बीचमा उनले पोखरा आएर लिखित जाहेरी दिन खोजिन् । तर बैदाम प्रहरीले उनको किटानी जाहेरी लिन मानेन । भीमाको मन के मान्थ्यो र ? उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की कार्यालयमा आएर प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) जीवन श्रेष्ठलाई हारगुहार गरिन् । प्रहरीले उनको जाहेरी लियो । त्यसलगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाईरहेको थियो ।
त्यहीबीचमा भीमाले आफ्नो छोरालाई ३ युवा मिलेर कुटपीट गरिरहेको भिडियो रहेको पत्ता लगाइन् । लगत्तै प्रहरीलाई जानकारी गराईन् । नभन्दै प्रहरीले लेकसाईडको १३ नम्बर स्ट्रिटमा मृतक किशोर नुभिवलाई कुटपिट गर्दै गरेको भिडियो भेटियो । त्यसपछि मात्र प्रहरीले घट्नालाई शुक्ष्म अनुसन्धान गर्दै हत्यामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लियो ।
पक्राउ पर्नेमा खोटाङ, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ घर भई कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–७ घारीपाटन बस्ने १८ वर्षीय आशिष राई, स्याङ्जा फेदीखोला–२ घर भई घारीपाटन नै बस्ने १९ वर्षीय बिगेन गुरुङ र स्याङ्जा अर्जुनचौपारी ६ घर भई घारीपाटन बस्ने १९ वर्षका बासुदेव गुरुङ रहेका छन । लेकसाइडको स्ट्रिट नं. १३ चोकमा यी ३ जना मिलेर नुभिवलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरिएको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका तीनैजनाले कुटपीट गरेको स्वीकारिसकेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका ३ जना हत्यामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक सुवास हमालले बताए । आरोपितले घट्ना स्वीकारिसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले सबै खोल्न मिल्दैन, तर प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष उनीहरुले नै हत्या गरेको हो भन्ने छ ।’
तर उनले शुरुमा घट्नाको अनुसन्धानमा प्रहरी चुक्यो भन्ने कुरा सहि नभएको बताए । मृतककी आमा स्वयंले छोराले आत्महत्या गर्छु भन्दै म्यासेज पठाएको भनेर जानकारी गराउनुका साथै शव बुझ्दा दिएको निवेदनमा समेत उल्लेख भएकाले शुक्ष्म अनुसन्धान नगरिएको बताए । हत्या अभियोग लगाइएका ३ जनालाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएर पुर्पक्षका लागि पठाउने तयारी भएपनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । ‘अनुसन्धान पूरा भएको छ, अब १÷२ दिनमा अदालतमा उपस्थित गराएर पुर्पक्षका लागि पठाउँछौं,’ डिएसपी हमालले भने ।
प्रहरीका अनुसार मिसिल तयार गरी आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भएको र त्यसपछि अदालती प्रक्रियामा गएको छ । दुईतीन दिनभित्रै बहस सुरु हुने जनाइएको छ । मृतककी आमा भिमा पोखरा आएर वैशाख २४ गते नै तीन जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । र, कानुननुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको प्रहरीले बताएको छ। नागरिक दैनिक वाट ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति द्वारा आह्वान, २४ घण्टाको समयसिमा
हामी निकास दिन छलफल गर्दैछौं : ठाकुर